Jeneraal Tuuryare oo tababar u soo xiray cutub ka tirsan ciidanka Nabadsugidda(Sawirro) – Radio Muqdisho
Jeneraal Tuuryare oo tababar u soo xiray cutub ka tirsan ciidanka Nabadsugidda(Sawirro)
Taliyaha Hey’adda Nabadsugidda iyo sirdoonka Qaranka Soomaliya Genaral C/raxmaan Maxamed Tuuruyare ayaa tababar soconayay mudo bilooyin ah usoo xiray boqallaal askari oo ka tirsan ciidanka NISA, dugsiga tababarka Nuur Shirbow ee magaalaa Muqdisho.
Jeneraal C/raxmaan Maxamed “Tuuryare” Taliyaha hey’adda Nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka ayaa ciidanka kula dardaarmay in ay u dhabar adeegan shaqada ay u haayan shacabka Soomaliyed.
Intaa kadib Gen. C/raxmaan Maxamed Tuuryare oo warbaahinta kula hadlay dugsiga tababarka ee Nuur Shirbow ayaa sheegay in ciidanka tababarka loo soo xiray ay ka hoowlgali doonan magaalada Muqdisho si ay ugu hortagaan dhagarta ay maleeshiyada UGUS u geysanaayan shacabka Soomaliyed.
Wuxuu tilmaamay in dhawaan wax laga badali doono soo galitaanka magaaloyinka dalka, iyadoo qofka muwaadinka ah ee soo galaya magaalada looga baahan yahay in uu iska diiwan galiyo xafiis yada hey ‘adaha amaanka si uu noqdo shaqsi la hubo.
Jeneral Tuuryare ayaa ugu baaqay shacabka Soomaliyed iyo shirkadaha Isgaarsiinta ee bixiya Simkaarada in ay la socdaan cidda isticmaaleysa Simkaarada loo adeeg sado falalka amni darro, isagoo sheegay in lala xisaabtami doono shaqsiyaadka hubeysan ee dareeskla shacabka wata.
Madaxweyne Xasan sheekh Maxamuud oo dib ugu soo laabtay Muqdisho
Wasiirka Diinta iyo Owqaafta oo u hambalyeeyay wiilka Soomaaliyeed ee ku guuleystay tartanka xifdinta Qur’aamka
Wasiirka Diinta iyo Owqaafta oo u hambalyeeyay wiilka Soomaaliyeed ee ku guuleystay tartanka xifdinta Qur'aamka